एक पिताले आफ्नी छोरी’लाई भनेको कुरा, जुन पढ्दा आँसु आउन सक्छ ! [एकपल्ट अबस्य हेर्नुहोला]:: Naya Nepal
एक पिताले आफ्नी छोरी’लाई भनेको कुरा, जुन पढ्दा आँसु आउन सक्छ ! [एकपल्ट अबस्य हेर्नुहोला]
बुवाले छोरीलाई उसको आइफोन उपहार दिनुभयो । भोलीपल्ट छोरीलाई सोध्नुभयो, प्यारी छोरी ! आइफोन पाएपछि तिमीले सबैभन्दा पहिला के गर्यौ ?
छोरीः बाबा मैले स्क्रेच गार्ड र कभरको अर्डर दिए,
बाबाः तिमीलाई यस्तो गर्न कसैले बाध्य गर्यो कि आफैं गरेको ?
छोरीः होइन,कसैले पनि गरेन,
बाबाः आइफोन निर्माता कम्पनीको बेईज्जती गरेको जस्तो लाग्दैन तिमीलाई ?
छोरीः लाग्दैन,बल्कि निर्माता स्वयंले नै कभर र स्क्रेच गार्ड लगाउने सल्लाह दिएको थियो।
बाबाः त्यसो भए त आइफोन नै देख्नमा खराब देखिन्छ होला, त्यसै कारण तिमीले कभर मगाएको होला है ?
छोरीः होइन बाबा, परन्तु आइफोन खराब न होस भनेर मगाएको हो ।
बाः त्यसो भए कभर लगाउँदा त्यसको सुन्दरतामा कमी आयो होला ?छोरीः आएन हजुर, यसको विपरीत कभर लगाउँदा आइफोन अझै धेरै सुन्दर देखिन्छ।
अब पिताले छोरीलाई स्नेह (प्रेम) ले हेर्दै यस्तो भन्नुभयो,छोरी, आइफोन भन्दापनि ज्यादा महंगो र सुन्दर तिम्रो शरीर हो र यो घरको र हाम्रो ईज्जत हो । तिमीले यो शरीरको अंगहरुलाई कपड़ाले कवर गर्दा शरीरको सुन्दरता धेरै बढ्छ । छोरीसँग बाबाको यो कुराको कुनै जवाफ थिएन, थियो त केवल आँखामा आंशु देखिएको थियो ।
यी कुरा हामीले कसैंको सम्मानमा ठेस पुगोस भनेर होईन बल्की जनचेतना फैलियोस भन्ने ध्यएका साथा राखेका हौं । राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् …जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ !
केहिदिन अघि मेरी श्रीमती बिरामी पर्दा मैले केही पनि गरिन यहाँसम्म कि एक कल फोन गरेर पनि खबर सोधिन उनले पुरैदिन केही खाएकी थिइन ,तर मैले उनलाई ब्रेड पस्किएर आफैलाई गौ’रवान्वित महशुस गरीरहेको थिए |
मैले यो देख्ने कोसिस पनि गरिन कि साच्चिकै उनलाई कति ज्वरो थियो मैले त्यस्तो केही गरिन कि उनलाई लागोस कि बिरामीमा उनी एक्लि छैन तर मलाई सानो तिनो रु’घाखोकी लागेर टा’उको दु’खिरहेको थियो तर उनी मेरी आमा बनिन म सोचिरहे कि साच्चिकै के भगवानले महिलालाई एउटा अलग्गै दिल दिल्छन ? महिलाहरुमा जुन क’रुणा र ममता हुन्छ त्यो पुरुषमा किन हुदैन ?
सोच्न थाले ,जुनदिन मेरी पत्नीलाई ज्व’रो आएको थियो , त्यो मध्यान्नमा जब उनलाई भो’क लागेको होला र ओछ्यानबाट उठ्न नसकेकि होली, त्यतिखेर उनले पनि सोचेकी होलिन कि कास मेरो पति आज मसित हुन्थ्यो भने ?
मैले जेसुकै सोचु तर मलाई लाग्छ कि हरेक पुरुषलाई एक जन्ममा महिला बनेर यी कुराहरु सम्झिने कोसिस गर्नुपर्दछ कि साच्चै नै कति मु’श्किल हुन्छ , महिलालाई महिला बन्नु , आमा हुनु , पत्नी हुनु र बहिनी हुनु |
‘४ जनाले पछाडि बाट समातेर खेतमै लडाए, जोडजोरले चिच्याए’पनि कसैले सुनेनन्”…
सामूहिक ब-लात्का-रमा परेकी सप्तरी’की एक १७ वर्षीया किशोरी’लाई ‘पञ्च’ ले मेलमिलापका लागि दबाब दिएपछि झु न्डिएर आ त्मह त्या गरेकी छन् । गाउँका भद्र’भलाद्मी समेतले पञ्चकै पक्षमा लागेर प्रहरीमा उजुरी गर्न नदिएर रकममा मेल’मिलाप गर्न दबाब दिएपछि उनले ज्यान फालेकी हुन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सोमबार बिहान डाक:नेश्वरी नगरपालिका–७ ललित:पुरकी १७ वर्षीया संगीता मण्डल:को स्थानीय चार युवाले सामूहिक ब-लात्कार गरेका थिए । सोमबार बिहान धान:खेतमा लगाएको पानी हेर्न गएकी किशोरीमाथि सामूहिक ब-लात्कार भएको पीडितकी आमा:ले बताएकी छन् ।
उनका अनुसार आरो’पित चार जनावि:रुद्ध उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय जान खोज्दा पञ्चको भेलाले रोकेका थिए । त्यस’पछि छोरी निकै तनावमा परेको उनले बताइन् ।
पीडित संगीताले आमा:लाई बताएअ’नुसार सोही ठाउँका धर्म मण्डल (३०), विष्णु मण्डल (३५), रञ्जित मण्डल (१८) र बब्लु मण्डल (१९) सहभागी थिए । उनीहरूमध्ये धर्म र विष्णुले ब-लात्कार गरेको र अरू दुई युवा:ले प्रयास गरेको प्रह:रीको प्रारम्भिक अनु:सन्धानले पनि देखाएको छ । घटना बिहानको करिब नौ बजेतिर भएको उनकी आमाले बताइन् ।
किशोरी हिलो ला:गेको र-गतपच्छे अवस्थामा रुँदै घर आएपछि घटनाका बारेमा परिवारले थाहा पाएको थियो । उनको घरमा आमा र उनका दाइ मात्र छन् । बाबु बिति:सकेका छन् भने अर्का दाजु वैदे:शिक रोजगारीमा छन् । उनीहरू अति विपन्न परिवा:रका भए:काले गाउँमै बटियामा खेत लिएका थिए । सो दिन उनी धान:खेतमा पानी धेरै भए आली काटेर बगाउन गएकी थिइन् ।
हातका चुरा फुटेका र कपाल पूरै फुकेको अवस्था’मा घर आएकी थिइन् । धेरै बेरसम्म एक’नास रोइरहिन् र चार जनाबाट आफू बला-त्कृत भएको सुनाउँदै गर्दा उनी बेहोस भएको पीडि’तकी आमाले रुँदै बताइन् । ‘चार जनाले पछाडिबाट समातेर खेतमै लडाए । वरपर अरू कोही थिएनन् ।
लुगा फुकाल्न थालेपछि जोर’जोरले चिच्या’उन खोजे पनि कसैले सुनेनन्’, पीडितले बताएको कुरा सुनाउँदै उनकी आमाले भनिन्, ‘मुख बन्द गरिएको थियो । आवाज नै बाहिर गएन । बला-त्कारीहरू जबर-जस्ती गरेर फर्किए । उनी घटनास्थलमै एकछिन बेहोस भइन् र जसोतसो उठेर घरसम्म आइन् ।’
घटनापछि उनकी आमाले गाउँबाटै सहयोग पाउने अपेक्षाले समुदायका मुख्य व्यक्तिलाई बोलाइन् । जसलाई तराईका जिल्लाहरूमा ‘पञ्च’ भनेर बोलाउने गरिन्छ । भेला भएका आठ जना पञ्चले आरोपितहरूबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने र पीडितले कतै उ’जुरी गर्न नपाउने ‘फैसला’ सोमबार दिउँसो दुई बजे’तिर सुनाइदिए ।
पञ्चहरूकै अगाडि आमाछोरी दुवैले त्यसको विरोध गरे पनि उनको कुरा कसैले सुनेनन् । पञ्चले चारै जना आरोपितलाई जनही २५÷२५ हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने फैसला गरेका थिए ।
पञ्चले एक जनाको इज्जत ठूलो कि सिंगो गाउँको भन्दै पीडितलाई धम्क्याएका थिए । प्रह’रीमा उ’जुरी गरे साक्षी प्रमाण जुटाउन नसक्ने भएकाले चुपचाप रहन उनीहरूले चेतावनी दिएको पी’डितका छिमेकी बताउँछन् । उजुरी गरे कि’शोरीकै बदनाम हुने, त्यसले बिहे पनि नहुने, आरोपितबाट पाउने क्ष’तिपूर्ति पनि छुट्ने भन्दै घटना बिर्सिन गाउँका ‘जान्ने–बुझ्ने’ ले भनेपछि किशोरी तना’वमा परेकी थिइन् ।
पीडित किशोरी र आमाले मंगलबार प्रहरी’समक्ष उजुरी दिने निष्कर्षसमेत निकालेका थिए । सोमबार दिनभर निक्कै विक्षिप्त रहेकी ती किशोरीले सोही राती सलको पासो लगाइन् । आ’रोपित चारै जना फरार भएका छन् ।
प्रहरीले पञ्चहरू’मध्ये तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पञ्चायतीमध्ये जयकान्त मण्डल, वासुदेव मण्डल र सत्यनारायण मण्डल’लाई इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरले प’क्राउ गरेको छ ।
सप्तरी प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक भारतीले उनीहरूलाई ब-लात्कार मु’द्दामा मतियारको भूमिका खेलेको, प्रमाण नष्ट र आ-त्मह त्या दुरुत्सा’हनसम्बन्धी मुद्दा’मा अनुसन्धान सुरू गरिएको बताए ।
‘जबरजस्ती गरेर दबाउन खोज्नेले भोलि अरूलाई पनि यस्तै नगर्लान् र ?’, पी’डितकी आमाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा पुर्याउने’हरूलाई कडा दण्ड स’जाय होस् भन्ने चाहना छ । तर, म एक्लै के गरुँ ? के गर्नेुपर्ने हो ? त्यो पनि थाहा छैन ।’ गाउँले’बाट त्यस्तो होला भन्ने कल्पनासमेत नगरेको उनले बताइन् ।
जिल्ला प्रहरी’का इन्स्पेक्टर सन्तोष खड्काले घटनास्थलमा पीडितले जोगिन संघर्ष गर्दा धान मडारिएको, चुराहरू फुटेको पाइएको बताए । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको श’व परीक्ष’णको विस्तृत रिपोर्ट आइसकेको छैन । प्रा’रम्भिक रि’पोर्टमा ब-लात्कार भएको पुष्टि भइसकेको छ ।